Gịnị mere Record na Dezie A Video?
Video ndekọ na-agaghịkwa adịkwaghị site Broadcasting ụlọ ọrụ dị ka ọ na-mbịne n'ime a nkịtị onu ebe onye nwere ike mfe idekọ a video clip na ha na ekwentị mkpanaaka. Ọ bụ na mfe pịa na igwefoto atụmatụ na mgbe ahụ ịmalite ndekọ ogologo oge ka ​​ị chọrọ, ebe nchekwa zuru ma ọ bụ ruo mgbe batrị si ewepụghị (bụla bu ụzọ bịa). N'agbanyeghị na ọ nwere ike na-enweghị na okwu nke ọkachamara video ntọala, nke ahụ abụghị nsogbu, dị ka e nwere ihe a obosara nhọrọ nke video edezi software ịhọrọ site na mgbe na edezi nzube.
Ndị ọzọ karịa color, ụfọdụ n'ime anyị na-ahọrọ iji a igwefoto ma ọ bụ camcorder. Nke ahụ bụ ghara ikwu dịghị ihe ọzọ, webcams maka online Hangouts (ie Google Plus) ma ọ bụ teleconferences (ie GoToMeeting) nke na-ma inweta ọzọ ewu ewu. Isi iche nke na-eji dị iche iche ma ọ bụ ngwá ụzọ idekọ a video bụ video ntọala ma ọ bụ akara, ọdịyo àgwà, faịlụ Ọkpụkpọ, mkpebi na ndekọ oge (ma ọ bụ nchekwa ikike).
Nzube nke Ịdekọ a Video
Common Ụzọ nke Distributing na-ekere òkè a Video
Gịnị mere Mkpa dezie a Video?
Olee otú na-Record na dezie a Video?
Na omenala ụlọ ọrụ, ọ bụ tumadi a n'ụdị ozi ọma dissemination na ji nwayọọ nwayọọ, ihe mmewere ntụrụndụ e kwukwara n'ime foto. Mgbanwe bụ nnukwu mgbe na-abịa na-akọwa ugbu a ọdịdị nke video ndekọ (ebe bụghị adịkwa aka nke ya gara aga ọcha), ekpuchi ma onye na azụmahịa na nzube. Atụ ndị dị ka ndị a:
Personal: kpere maka nkekọrịta na ntụrụndụ
Efu si na-ebi ndụ na agbasa ozi n'ikuku ma ọ bụ ezigbo oge TV show
Oge na-enwe nsogbu dị ka ihe karịrị otu mmasị show na-aired n'otu oge
Share gameplay scores ma ọ bụ ọbụna azum na ndị enyi
Idebe a video log ma ọ bụ Journal nke njem, njem, ememe, ememe ma ọ bụ ndị ọzọ occassions
Business / Commercial: Revenue ọgbọ ma ọ bụ nkwado nzube
Mee online akwụkwọ ma ọ bụ nzukọ ji ihe onwunwe inweta offline na ndị na-enweghị ike ime ka ọ na
-Eduzi on kpọmkwem njikwa ma ọ bụ ntụziaka dị ka nri, idozi na mmezi, software igodo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ
Na-a ọkọlọtọ archiving omume na-ejekwa ozi dị a ndabere nchekwa
Common Ụzọ nke ekesa na-ekere òkè a Video
Nkịtị ụzọ nke na-ekesa a video bụ site USB telivishọn, dijitalụ nnyefe, satellite na Internet. Ọ bụ na enweghị obi abụọ na Internet bụ ihe kasị họọrọ usoro nke niile. Nke a nwere ike hụrụ site na upsurge nke video nkekọrịta (ma na-ebugote na downloaing) eme gafee online video nyiwe dị ka YouTube, Netflix, Hulu, Vudu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Broadcasters na-ugbu a sooro ọtụtụ ndị ọrụ ndị ọzọ na-ekerịta video ọdịnaya; ka ọ na-abụ maka onye ma ọ bụ azụmahịa ojiji. The Internet si uru nke ịbụ ike iru otu ìgwè nke wider-ege ntị na Obodo anya na-agba ume onye ọrụ nakwa dị ka ulo oru ịkọrọ videos n'otu ntabi site n'ọnụ na-ebugote mkpachị jidesie ha mmasị mmadụ mgbasa ozi na saịtị.
Otú ahụ ogologo oge na video nhọrọ na-akwado, vidio nwere ike mfe agbakwunyere jidesie ha blọọgụ ma ọ bụ na weebụsaịtị. Na n'elu nke, dere videos nwekwara ike dezie tupu nkekọrịta aka playback on ụfọdụ ụdị ngwaọrụ nakwa dị ka DVD kere. The videos dere iji a igwefoto ma ọ bụ camcorder na-ejikari echekwara na ọ bụ raw format (na ala faịlụ Ọkpụkpọ), n'ihi ya ibu file size na mgbe sụgharịrị kedi iche na ụfọdụ video edezi software.
Ya mere, ọ na-mgbe nile-atụ aro ka mpikota onu faịlụ size na tọghata faịlụ Ọkpụkpọ tupu oge eruo. Ma, ị ga-ewekarị ejedebe na lagged arụmọrụ n'oge playback na PC na mobile ngwaọrụ ma ọ bụ na-emeghị bulite video faịlụ maka edezi (n'ihi codec iche).
Mere Mkpa dezie a Video?
Ọzọ adị dị ka onye na mkpokọta maka bipụta na-ege ntị
Ihichapụ ma ọ bụ ewepụtụ enweghị isi okpokolo agba ma ọ bụ mkpachị
Ịkwa akwa ma ọ bụ hazie ya (ie itinye mmetụta ma ọ bụ ikwu n'ụzọ)
Tinye akomako ma ọ bụ olu-ihe karịrị (ie maka nkuzi dabeere videos)
Agbanye a gallery nke foto n'ime a ngosi mmịfe
Bee si mgbasa ozi ma ọ bụ mkpọsa ngwá ahịa si dere videos
File size mkpakọ ma ọ bụ usoro akakabarede
Iji na-ede akwụkwọ, ike na ọkụ a DVD (ma ọ bụ softcopy na ISO faịlụ oyiyi)
Dabere na sistemụ ị na-eji, e nwere bụ mgbe tupu arụnyere video edezi software na-abịa na gị PC, ma Windows Movie Onye kere maka Windows ma ọ bụ iMovie maka Mac. Otú ọ dị, ụfọdụ n'ime unu nwere-emeghe ka uzo ozo n'ịtụle faịlụ Ọkpụkpọ ọsọ ọsọ mgbochi na atụmatụ si mmachi awa site iche software. The Video Converter Ultimate ga-enwe ike dabara n'ime gị ọ bụla video mkpa si Ndekọ na edezi, akakabarede, nbudata nakwa dị ka DVD authoring na e kere eke.
Olee-idekọ na dezie a Video?
Biko ahụ ntuziaka n'okpuru maka na ndekọ ma edezi a video on a Windows version nke Video Converter Ultimate.
1 Wụnye Video Converter Ultimate
The video edekọ bụ wuru na-na Video Converter Ultimate ngwugwu. Ozugbo ị ebudatara ma wụnye software, ị ga-enwe ike ịchọ "Wondershare Video teepu" si Malite button na gị Windows dabeere PC.
2 Malite ndekọ
Ozugbo red mgbodo abịa na gị na ihuenyo, ị nwere ike pịa na rec button kpọmkwem ma ọ bụ ka ịkwụsị ndekọ mgbe a ụfọdụ oge. Ndị ọzọ karịa ndekọ ọrụ, ị nwekwara ike ịnyagharịa ka Download 's taabụ ibudata ọ bụla nke ọkacha mmasị gị videos, na batches.
3 Gbanwee Video Ntọala
Ị nwere ike mfe ịtọ gị họọrọ video na ọdịyo àgwà ma ọ bụ ndị ọzọ na ntọala ya tupu converting faịlụ ma ọ bụ na-ere ọkụ ha jidesie a DVD.
4 Ọkụ a DVD
E nwere ọtụtụ ndebiri ịhọrọ site na ihe ike n'ihi na ị na-ahọrọ nakwa dị ka ndị ọzọ na-agbanwe nhọrọ. Na ihe atụ; ka itinye ndabere music, foto, họrọ TV ụkpụrụ, akụkụ ruru na ịmepụta otu ISO faịlụ oyiyi.
Record ihuenyo Arụ Ọrụ na Sound
> Resource> Record> Gịnị mere Record na Dezie A Video?